BGR - - Tele relay ကနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းဂျပန်ကုန်တင်မစ်ရှင်မီးနောကျကိုဆေးကြော
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ မီးနောကျကိုဆေးကြောသည့်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းဖို့ "ဂျပန်ကုန်တင်မစ်ရှင် - BGR
အလွန်ခက်ခဲသည်အာကာသသို့သောအရာတို့ကိုပေးပို့ပါ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ဒီရက်ကိုမြင်သောဒုံးပျံတိုက်ခိုက်မှုများ၏ထင်ရသောစဉ်ဆက်မပြတ်တရစပ်အတူကြောင့်မေ့လျော့ဖို့လွယ်ကူဖြစ်ပေမယ်ရှိကွောငျးအများအပြားအောင်မြင်သောပစ်လွှတ်မှုအတွက်အမြဲတမ်းကိုအနည်းဆုံးအချို့လည်းမရှိနိုင်ပါတယ် သူလမ်းတစ်လျှောက်တွင်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရ။ ထိုသို့သောစတင်ခံရဖို့အင်္ဂါနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ်ကြောင့်ပစ်လွှတ် pad ပါအပေါ်သို့မီးကိုတစ်အကြာမှာယနေ့အထိရွှေ့ဆိုင်းခံရဖို့ခဲ့သည့်ဂျပန် HTV ကုန်တင်မစ်ရှင်-8 ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
As SpaceNews အစီရင်ခံစာများ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်အာကာသအာကာသယာဉ်၏မီး skyward projected ကြလိမ့်မည်ဟုသော H-2B ဒုံးပျံတင်ဆောင်ပလက်ဖောင်းပေါ်ထွက်ဖဲ့ပြီးနောက်မြေပြင်ပေါ်တွင်ယနေ့နေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါသင်္ဘောအမှုထမ်းများအတွက်ကုန်တင်နီးပါး 5,5 တန်ချိန်သယ်ဆောင်။ အဆိုပါအာကာသစခန်းသူ့ဟာသူအသစ်ဘက်ထရီအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းဖြစ်သည်။ ယခုအဘို့, ယူပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဂြိုဟ်တုနောက်ကွယ်ကကုမ္ပဏီဖြစ်သော Mitsubishi Heavy Industries,, ကနေတစ်ဦးကကြေညာချက်မီးအသေးစိတ်ကိုသို့သွားစရာမလိုဘဲခန့်သုံးနာရီစီစဉ်ထားပစ်လွှတ်မတိုင်မီထွက်ဖဲ့ကပြောပါတယ်။ မီးဒါမှမဟုတ်ဒုံးပျံမှအပျက်အစီး၏အတိုင်းအတာ, ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်အခြားအရေးပါသောအဟာ့ဒ်ဝဲများ၏အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်. ။
ယနေ့ပစ်လွှတ် 3h05 ဖို့ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်။ ကျနော်တို့ကမိုဘိုင်း Launcher ရဲ့တံတား၏အပေါက်တစ်ဝှမ်းမီးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ JST
ကျနော်တို့အခုမီးငြိမ်းသတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ # H2BF8
- Launch န်ဆောင်မှုများ MHI (@MHI_LS) 10 septembre 2019
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းနှင့် ပတ်သက်. နှောင့်နှေးနေတဲ့ပြဿနာမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအရေးပါသောအထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတစ်မှန်မှန်စီးဆင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်နှင့်, သင်္ဘောသား, ဆိုက်ရောက်ပေါ်မှာကမ္ဘာဓာတ်ခွဲခန်းအတွေ့အကြုံသစ်ကိုဖွင့်မယ်လို့ပေမယ့်ရေသို့မဟုတ် breathable လေထုလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ပြဒါးတစ်ဦးမုန့်ရောင်စုံမျက်နှာသုံးပြီးပြီးနောက် "Semi-မေ့မြော" တွင်ကျရောက် - BGR
Bash မှာ - အငြင်းခုံ (parameters တွေကို) - သိကောင်းစရာများ
bombshell! Kaaris Booba ဆန့်ကျင်သည်သူ၏ရန်ပွဲ waives: "သူကငါ့ကိုအားလုံးကိုအချိန်ကိုပြောသွားကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သမိုင်းဖြစ်လာသည်"
အိန္ဒိယ: န်ကြီးချုပ်မိုဒီပစ်မှတ်ဟာရမ်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်တွင် "ကြီးမားသောပါးစပ်"; | Jibe Sena ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် အိန္ဒိယသတင်း
Google က Wizard ကိုပြင်သစ်အပါအဝင်ကိုးနိုင်ငံများအတွက်တစ်စက္ကန့်စကားသံကိုထောက်ပံ့
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,671